လသားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ယောက်နဲ့ ဆင်းဒုက္ခခံသားနေရတဲ့ ကလေးငယ်ကို ကူညီနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Sinon – Sport Gaber
လသားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ယောက်နဲ့ ဆင်းဒုက္ခခံသားနေရတဲ့ ကလေးငယ်ကို ကူညီနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Sinon
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ ယခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ပရိသတ်တွေ အားလုံးလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ Sinon အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sinon ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ရင်းနဲ့ သူတတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ ပရဟိတတွေကို လုပ်ဆောင်နေတာ အားလုံးအသိပဖြစ်ပါတယ်။
Sinin ကိုယ်နိုင်ကလည်း အိမ်ခြေယာမဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ဘဝကနေ တက်လာတာမို့ အိမ်ခြေယာမဲ့တွေ့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု ၊ ဖြတ်သန်းရတဲ့ ဒုက္ခ ၊ ခံစားရတဲ့ စာလောင်မှုတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး ခံစားခဲ့ရခဲ့ရပြီး အဲ့လိုဘဝတူတွေ တွေ့ရင် သူအရမ်းခံစားရပြီး မကူညီပဲ မနေနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
ယခုလည်း ကလေးငယ်လေးကို ပွေ့ပြီး လမ်းဘေးမှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးငယ်ကို သူကူညီနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူရဲ့ Fb page မှာတော့ ..
Ohhhh nooooo !(How we can help these kids? ) ဒီကလေးကို ငါတို့ ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ ဆိုပြီး တင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Sinon အနေနဲ့ ဒီကလေးကို ကူညီနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ကရစ်ဒစ်
လသားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ယောက် နဲ့ ဆင်းဒုက္ခခံသားနေရတဲ့ ကလေးငယ်ကို ကူညီနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Sinon
ယခုလည်း ကလေးငယ်လေးကို ပွေ့ပြီး လမ်းဘေးမှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးတဲ့ ကလေးငယ်ကို သူကူညီနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူရဲ့ Fb page မှာတော့ ..
Sorce: Sinon Loresca